Amazinga aphezulu yenjini - kuba amashwa kakhulu njalo umnikazi imoto. Mhlawumbe ngamunye wethu kwase imi sibukela "Zhiguli" futhi "iNsephe" nge "a ukubila" izinjini, ikakhulukazi ehlobo. Ngokuvamile, izinga lokushisa injini yokusebenza kumele singeqi uphawu-90 degrees Celsius. Uma isibonisi lokushisa uya libomvu, esongela bafake anda zonke izingxenye futhi izingxenye yangaphakathi omlilo injini kuze kube uyisehluleki. Kuhle motor Ishisa Ukuvikelwa - Yebo, ukuvikela. Ngakho-ke, ukuze waphinda ungathengi izingxenye ezintsha, ngemva kwezigigaba ezifana nalezi, ngezansi sethula imithetho eziyisisekelo zokusebenzisa izinga lokushisa injini njalo lahlala uhla evamile.
Kuyinto lesi sici inomthelela Ukushisa noma Ukupholisa ngomoya yenjini. Kusukela indlela Ukupholisa okukhulu okuyakuba khona, nokwake kuzoncika izinga lokusebenza yenjini. Vaz 2112, njengezinye eziningi nezinye umgibeli izimoto ebusika ngokuvamile zinabantu amafasitela ekhethekile (kule nguqulo umphakathi zezinhlamvu kuthathwe amakhadibhodi), okuyinto ibekwe ngaphansi Izinsimbi. Zinciphisa ukugeleza komoya abandayo, ngakho izinga lokushisa zokusebenza injini kunyuke. Ngokungafani ubusika, amadivayisi njenge adiliza ehlobo, futhi ngezinye izikhathi radiators esikhundleni okukhulu ngaphezulu. Ngokwesibonelo, "GAZelisty" ukunikeza radiators 3-Sectional esikhundleni standard 2-emhlanjini. Area Ukungena abandayo emoyeni ukhula ngokuphindwe izikhathi ezingu-1.5, ngakho ingozi okweqile of is kakhulu ziyancipha. Izenzo ezinjalo kungenziwa nanoma iyiphi enye imoto, ngisho "kwabayishumi abaphasa ngamalengiso." Khona-ke, izinga lokushisa lokusebenza yenjini 2110 uyohlale evamile.
Ingxenye engezansi yangaphakathi omlilo engine kumele njalo ivalwe, noma okungenani ehlanganiswa nengxenye. I ezincane emoyeni uwela ngezansi asphalt ashisayo, ephansi izinga lokushisa lokusebenza yenjini. Hood kuyinto efiselekayo ukuvula kancane kancane ukuba bathathe lesi sihlalo kuze kwabangela zokuzivikela ukuvikela enqabeni. Ngokuvamile abanikazi "Lada" futhi "iNsephe" ibekwa umqhewu ibhodlela plastic ukuthi wayengaphezu emoyeni ukubhajwa. Kodwa ukwenza kanjalo-ke osithandayo lapho izinga lokushisa injini yokusebenza ifinyelela degrees 95 noma ngaphezulu (noma amamilimitha angu kusuka esikalini obomvu).
Le ngxenye kunomthelela oqonde ngqo kwi lokushisa kanye nesimo emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni e kurediyetha. Ukuze i yangaphakathi omlilo injini ehlobo akuyona "ukubila", ungakwazi ukususa lento imoto. Kodwa kufanele kube kuvimbanise Ukupholisa indilinga lencane, noma ukusetshenziswa isenzo esinjalo kuyoba. Ngezinye izikhathi abashayeli ukuba thermostat 90-degree setha 80 70 degrees izinto ukuze Ukupholisa iyashelela.
Futhi into eyodwa ngaphezulu: ukuze kuphole ngempumelelo emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni injini, kubalulekile ukukhiqiza esikhundleni ngesikhathi sako. emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni likhanyelwe cishe njalo ngemva kwezinyanga ezintathu.
Uma ulandela le mithetho, izinga lokushisa lokusebenza yenjini emotweni yakho zizohlala esikalini oluhlaza.
Ukulungiswa Hepatitis C "sofosbuvir": ukubuyekezwa, yokusetshenziswa